Ithegi: hubspot | Martech Zone
Amanyathelo ama-4 okuPhumeza okanye ukuCoca iDatha yeCRM ukunyusa ukusebenza kwakho kwentengiso
NgoMvulo, Meyi 2, 2022 NgoLwesibini, Meyi 3, 2022 Douglas Karr
Iinkampani ezinqwenela ukuphucula ukuthengisa kwazo ngokuqhelekileyo zityala imali kwisicwangciso sokuphunyezwa kweqonga lobudlelwane bomthengi (CRM). Sixoxile ukuba kutheni iinkampani zisebenzisa iCRM, kwaye iinkampani zihlala zithatha inyathelo… kodwa iinguqu zihlala zisilela ngenxa yezizathu ezimbalwa: Idatha - Ngamanye amaxesha, iinkampani zikhetha ukulahla idatha yeeakhawunti zabo kunye nabafowunelwa kwiqonga leCRM kunye idatha ayicocekanga. Ukuba sele benayo iCRM ephunyeziweyo,
Unokuzingisa njani kwiiNtengiso Ngaphandle kokucima iiNkokeli zakho
NgoMvulo, Februwari 21, 2022 NgoMvulo, Februwari 21, 2022 Samir Sampat
Ixesha liyinto yonke kwishishini. Ingangumahluko phakathi komthengi omtsha onokubakho kunye nokuxhonywa. Akulindelekanga ukuba ufikelele kwintengiso kwiinzame zakho zokuqala zokufowuna. Kungathatha iinzame ezimbalwa njengoko uphando oluthile lucebisa ukuba kungathatha iifowuni ezininzi njenge-18 ngaphambi kokuba ufikelele ekukhokeleni kwifowuni okokuqala. Ewe, oku kuxhomekeke kwizinto ezininzi eziguquguqukayo kunye neemeko, kodwa inye
Ividiyo yeHippo: Ukunyusa imilinganiselo yokuPhendula ngokuThengisa ngokuThengisa iVidiyo
NgoLwesithathu, Novemba 24, 2021 NgoLwesithathu, Novemba 24, 2021 Douglas Karr
I-inbox yam imdaka, ndizakuyivuma tu. Ndinemithetho kunye neefolda ezihlakaniphile ezigxile kubathengi bam kwaye phantse yonke enye into iwela ecaleni ngaphandle kokuba ibamba ingqalelo yam. Ezinye iindawo zokuthengisa ezibalaseleyo zii-imeyile zevidiyo ezithunyelwe kum. Ukubona umntu ethetha nam buqu, ejonga ubuntu bakhe, kwaye ngokukhawuleza echaza ithuba lam kukuzibandakanya… kwaye ndiqinisekile ukuba ndiphendula ngakumbi.
ZoomInfo: Ukukhawulezisa uMbhobho wakho we-B2B ngeDatha yeNkampani njengeNkonzo (DaaS)
NgoLwesine, Novemba 4, 2021 NgoLwesine, Novemba 4, 2021 Douglas Karr
Ukuba uthengisela amashishini, uyazi ukuba kunzima kangakanani ukufumana iinkampani ezilindelekileyo kwaye ulandelele phantsi abo bathatha izigqibo apho… singasathethi ke ngokuqonda injongo yabo yokuthenga ngokwenene. Ii-superstars zeB2B zezentengiso ezimangalisayo, zifowunela emva kokufowuna kubafowunelwa bangaphakathi nabangaphandle abakhe ubudlelwane nabo ukuze bachonge abantu abafanelekileyo kwiinkampani ezifanelekileyo - ngexesha elifanelekileyo. I-ZoomInfo yakhe iDatha ekhokelayo kwihlabathi jikelele njengeqonga leNkonzo (DaaS).